Caitlyn Jenner Anoda Kuva Bruce Zvakare? - Macelebs
Kuru Macelebs Style Varaidzo Blog
Caitlyn Jenner Anoda Kuva Bruce Zvakare?
Imwe yevhiki ino tabloids inodaro Caitlyn Jenner anoda kudzokera pakuve Bruce Jenner . Nyaya ndeyekunyepa zvachose. Uye Makuhwa Cop unogona kuibvisa.
David Buchan / REX / Shutterstock
Zvinoenderana ne Globe , aimbove Olimpiki anofunga 'hupenyu semukadzi hwakanyanya kuoma,' uye anga achinetseka kutsungirira mhedzisiro kubva kune ekurapwa kwemadzimai echikadzi, kusanganisira cramp uye bloating. Anofungidzirwa sosi inotaurira magazini kuti, 'Anoda kuve murume zvakare. Akapusa akatenda kuve mukadzi kwaizochinja hupenyu hwake kuti huve nani. Asi Cait ane kusahadzika kwekusava nechokwadi nezve shanduko yake uye kutsvaga mikana yekuchinja kuvhiya kwepabonde. '
Anoburitswa mukati anopfuurira kupokana kuti Jenner anonetsekana nekushaikwa kwehupenyu hwerudo kubva pakuva mukadzi, uye anotambudzwa nekusahadzika pamusoro pechisarudzo chake chekuchinja vanhurume. Anogara achizvibvunza kuti, 'Nei ndazviitisa izvozvo?' ' 'Chinhu chekupedzisira chaanoda maawa akawanda ekuvhiya kunorwadza, asi ari kutarisa mukati mawo kuti adzokere kuna Bruce. Iko hakuna kudanana muhupenyu hwake uye ari kusuwa Bruce - iri hellish combo. '
Chirevo chetabloid chinoenderana nezvakataurwa kubva kune asingazivikanwe uye pamwe akagadzirwa 'sosi,' asi Makuhwa Cop akatarisa nemutauriri waJenner, uyo anotiudza pachinyorwa kuti 'hazvina kunaka.' Kunyangwe zvinotaurwa nemagazini iyi asingazivikanwe tipster, mumiriri weiyo nyeredzi anotivimbisa kuti anofara kuve mukadzi uye haasati ambofunga zvekudzokera kuna Bruce.
nikki bella kubatanidzwa mhete artem
Mubvunzurudzo naDiane Sawyer makore anoda kusvika maviri apfuura, Jenner akabvunzwa kana asina chokwadi kana kuzvidemba nezvekuchinja kwake. Aimbove mumhanyi weOlimpiki akapindura, 'Hazvimboiti. Handina kumbova nechokwadi. Kuvhiringidzika kwese kwandisiya. ' Mifungo yake pamusoro penyaya haina kuchinja.
alan thicke tanya callau zera
Izvo zvakakosha kuti uzive iyo tabloid fungidziro zvakare haisi yepakutanga. Anopfuura makore matatu apfuura, Makuhwa Cop kudaidzira iyo Globe hanzvadzi hanzvadzi, Nyeredzi , nekunyepera kuti Jenner aida kuzove murume zvakare. Pfungwa iyi yanga isiri yechokwadi panguva iyoyo uye haisisiri yechokwadi izvozvi.
Pamusoro pezvo, chiteshi chinoti iye chaiye nyeredzi anoda kuve murume zvakare nekuti hupenyu hwerudo hwakamira, asi muna Chikunguru apfuura, tabloid yakati Jenner airoora Sophia Hutchins nekutora mwana naye. Iyo nyaya yanga isiri yechokwadi futi, asi inoratidza kuti magazini yacho haigone sei kuchengeta nhaurwa dzayo dzekunyepedzera dzakatwasuka.
Munguva kubva Jenner paakachinja kutanga kwa2015, akajekesa kanoverengeka kuti anofara nehupenyu hwake hutsva semukadzi. Pane zero humbowo hunoratidza neimwe nzira uye chero zvirevo pamusoro pake zvekuda kuve murume zvakare zvese hazvina kunaka uye hazvina hwaro. Iyi ingori isiri-nyaya.
Zvimwe pane Gossip Cop:
thad luckinbill uye amelia heinle muchato
Meghan Markle Kugamuchira Mwana Kuti Aite SaPrincess Diana, Madonna & Angelina Jolie?
Chokwadi Nezve Ellen DeGeneres, Portia De Rossi's 'Crumbling' Kuroora
Jennifer Aniston Kusanganazve Naamai vaBrad Pitt?
Caitlyn Jenner, 69, uye runyerekupe musikana, 23, kubuda
Cameron Diaz naBenji Madden vane husiku husina kujairika muLa
Dwayne Johnson naTirese pakupedzisira vanokanganisa kwavo makore matatu kukakavara
Kurambana kwaKeegan-Michael Key kwapera, achabhadhara ex angangoita $ 34k pamwedzi mukutsigira murume / mukadzi
Amber Portwood anorasikirwa nekuchengetwa kwemwanakomana mushure mekurwiswa nemachete
A-Rod inotumira inomhanyisa vhidhiyo mutero kuna J.Lo pazuva rake rekuzvarwa makumi mashanu: Tarisa
Joshua Jackson naJodie Turner-Smith vanofungidzira zvekuroora
rute negga uye Dominic cooper
megalyn echikunwoke uye chris dombo
john cena uye nikki bella vane makore mangani
ichangoburwa pane khloe uye tristan thompson
niall horan uye hailee steinfeld